Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamad kutaala Adis Ababa oo isu Badashay Goob mudaharaad.
Maxkamad kutaala Adis Ababa oo isu Badashay Goob mudaharaad.
Posted by Wariye Qaran	/ June 20, 2018
Maxkamad kutaalada xaafata dhilataa kifaltaa oo kamid ah xaafadaha magaalada Adis Ababa ayaa isu badashay goob mudaharaad kadib markii ay maxaabiis loo keenay in lagu xukumo goobta mudaharaad kasameeyeen.
Maxaabiistan mudaharaadka sameeyay oo Ku eedaysnaa kiisas kala duwan ayaa loo balansanaa in laxukumo wakhtigaas balse taasi ma aysan dhicin oo waxay sameeyeen arin ay uu gumaysigu layaabay iyaga oo hal mar qaylo afka furatay
Maxaabiista ayaa kudhawaaqayay erayo kadhan Ah kooxda TPLF iyagoo ku dhawaqmaqayay in kooxda TPLF tahay koox dhiig miirato ah oo bilaa sabab kulaaya shacabka una gaysta xabsi iyo waxyaabo kale oo aysan mutaysan.
Sikastaba hanoqotee xaalada guud ee gumaysiga Itoobiya ayaa maraysa meel aad uxun waxaana isasoo taraya mudaaharaadada ka dhanka ah gumaysiga Itoobiya shacabkuna wuxuu usii seeto dheeraysanayaa gumaysdiid nimo.